cable ဂလင်း, ဝါယာကြိုး Connector, လေကြောင်း Connector - Rongwei
ပလပ်စတစ် Cable ကို gland
ပလပ်စတစ် cable ကိုဂလင်း PG-P ကို ​​type ကို
ပလပ်စတစ် cable ကိုဂလင်းအမတ်အမျိုးအစား
ပလပ်စတစ် cable ကိုဂလင်း PG-C အ type ကို
ပလပ်စတစ် cable ကိုဂလင်း MC အမျိုးအစား
ပလပ်စတစ် cable ကိုဂလင်း PG-S ကအမျိုးအစား
ပလပ်စတစ် cable ကိုဂလင်းက MS အမျိုးအစား
ပလပ်စတစ် cable ကိုဂလင်း PGL အမျိုးအစား
ပလပ်စတစ် cable ကို MG-တစ်ဦးကအမျိုးအစား gland
ပလပ်စတစ် cable ကို PG-B ကအမျိုးအစား gland
ပလပ်စတစ် cable ကိုကို MB အမျိုးအစား gland
ပလပ်စတစ် cable ကိုဂလင်း NPT အမျိုးအစား
ပလပ်စတစ် cable ကို, G အမျိုးအစား gland
ပလပ်စတစ် cable ကို PG-BR အမျိုးအစား gland
ပလပ်စတစ် cable ကိုက M-BR အမျိုးအစား gland
ပလပ်စတစ် cable ကို PG အမျိုးအစား gland
ပလပ်စတစ် cable ကိုဂလင်းက M အမျိုးအစား
ပလပ်စတစ် plug ကို PG-T က / MT type ကိုပေါင်းလိုက်သော
ပလပ်စတစ် plug ကို PG-ST type ကိုပေါင်းလိုက်သော
metallic Cable ကို gland
metallic Cable ကို PG-M type ကို gland
metallic Cable ကို MM အမျိုးအစား gland
metallic Cable ကို PG-MA အမျိုးအစား gland
metallic Cable ကိုက M-MA အမျိုးအစား gland
metallic Cable ကို PG-MB အထိအမျိုးအစား gland
metallic Cable ကိုဂလင်းက M-MB အထိအမျိုးအစား
metallic Cable ကို NPT-MB အထိအမျိုးအစား gland
metallic Cable ကို, G-MB အထိအမျိုးအစား gland
metallic Cable ကိုဂလင်း PG-က MS အမျိုးအစား
metallic Cable ကိုက M-က MS အမျိုးအစား gland
metallic Cable ကိုဂလင်း PG-MO ကိုအမျိုးအစား
metallic Cable ကိုဂလင်းက M-MO ကိုအမျိုးအစား
metallic Cable ကိုဂလင်း, G-MO ကိုအမျိုးအစား
EMC သတ္တု Cable ကိုဂလင်း PG-EMC အမျိုးအစား
EMC သတ္တု Cable ကိုဂလင်းက M-EMC အမျိုးအစား
adapter PG-MR အမျိုးအစား
adapter က M-MR အမျိုးအစား
adapter PG-ME အမျိုးအစား
adapter က M-ME အမျိုးအစား
adapter PG-MF အမျိုးအစား
adapter က M-MF အမျိုးအစား
adapter PG-TM အလိုအလျောက်အမျိုးအစား
adapter က M-TM အလိုအလျောက်အမျိုးအစား
လျှပ်ကာ Terminal နှင့်
လှောင်အိမ်နွေ Terminal နှင့် (အစိုင်အခဲများနှင့်မတ်တပ်ရပ်ဝါယာကြိုးများအတွက်) ကို Block
plug-in Terminal နှင့် Block
စာနယ်ဇင်းအမျိုးအစား Terminal နှင့် Block
လေကြောင်း connector ကို
R & D အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှု
ပစ္စည်း: UL.Thread အထူးအသေးစိတ်ကအတည်ပြုထားတဲ့နိုင်လွန်, PA66 နှင့် NBR, .: မက်ထရစ်, Din, BS, အပူချိန် ansi.Working: ငြိမ်: 100 ကို C, 120 deg C, ပြောင်းလဲနေသောမှချက်ချင်းအပူခုခံဖို့ -40 deg C က -20 80 deg C ကို 100 ဒီဂရီ CelsiusColor မှချက်ချင်းအပူခုခံဖို့ deg C: Black က (RAL9005), မီးခိုးရောင် (PAL703 ...
ပစ္စည်း: 100 ကို C, 120 deg C, ပြောင်းလဲနေသောမှချက်ချင်းအပူခုခံ -20 Deg မှ -40 deg C: ငြိမ်: နီကယ်ချထားတဲ့ကြေးဝါ, ul အပူချိန် ansi.Working, နိုင်လွန် PA66 နှင့် nbr.Thread အထူးအသေးစိတ် .: မက်ထရစ်, Din, BS အတည်ပြု 80 deg C ကို 100 ဒီဂရီ CelsiusFeatures မှချက်ချင်းအပူခုခံဖို့ကို C: အထူး Clamp CLA ...
အဓိကမိုက်ခရို switch ရဲ့ထုတ်လုပ်မှု, rocker ခလုတ်, Toggle အား switch ကို, ခလုတ်ကို switch ကို, signal ကိုဆီမီးခွက်, ပါဝါ socket နှင့်အခြားသစ်ကို products.Widely ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ, အီလက်ထရောနစ်တူရိယာများနှင့်မီတာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ, မော်တော်ကား, အိမ်သူအိမ်သားကရိယာများနှင့်အီလက်ထရောနစ်ကစားစရာများနှင့်အခြားနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုသော ။
connection: Threaded connection Shell ကပစ္စည်း: Thermoplastic PA66 PA6 insulator တွင်လည်း: ThermoplasticPPS မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ 260 ℃ဆက်သွယ်ပါပစ္စည်း: ကြေးနီ (ရွှေသင်းကျစ်ပြား) connection မုဒ်: ဂဟေဆက်အိမ်ထောင်ဖက်သံသရာ:> 500 အပူချိန်အကွာအဝေး: 85C မှ -25C
Off-ယိုစိမ့်လက်ရှိအနိမ့်အထွက်; စုစုပေါင်းပါဝါအသေးအဖွဲအနိမျ့ impedance MOSFET output ကို, ခုခံရေးဝန်နှင့် inductive ဝန်များအတွက်သင့်လျော်သော (ထိုကဲ့သို့သောမော်တာနှင့် EMR / solenoid inductive ဝန်အဖြစ် retro-သငျ့နှိမ်နင်း၏ဖြစ်ရမည်); LED မီးလုံးကိုညွှန်းနှင့်အတူ; RC စံ output ကိုကြားခံပါရှိသည်; ပွင့်လင်းအကာအကွယ်အဖုံးအပိုဆောင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုပေးပါသည်။
shell: PC ကွန်ပျူတာ, UL94, V-2 အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်လက်ရှိ / ဗို့: / 400V 32A Solid ဝါယာကြိုး: 0.08-2.5mm² / 28-14AWG ကမ်းနားလမ်းဝါယာကြိုး: 0.08-4.0mm² / 28-12AWG မြှောင်အရှည်: 9-10mm / 0.39inch
Rongwei လျှပ်စစ် Co. , Ltd မှစက်မှုခရိုင် Qiligang Yueqing စီးတီး, Zhejiang Provience ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ connectors ထုတ်လုပ်အတွေ့အကြုံ 20 နှစ်ကျော်အတူ modernizde လုပ်ငန်းကိုအဘယ်သူသည်။ R & R ကို 's philsosphy "Professional, ထိရောက်မှု, High-end ထုတ်လုပ်နှင့်ရိုးသားမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်" ရန်ဖြစ်ပါသည်။ R & R ပြီးသား "ထုတ်ကုန်အသစ်တွေဖွံ့ဖြိုးအသစ်နည်းပညာများကိုလေ့လာစူးစမ်း" ရန်ဖြစ်သောယင်း၏ရေရှည်ရည်မှန်းချက်အပေါ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်သိရသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်သော expericence နှင့်ထုတ်ကုန် per R & R ကိုကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ဦးလူသိများတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အချိန်ကာလနှင့်အတူတိုးတက်, ကုမ္ပဏီထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများကို update အတွက်အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားပါတယ်, ဆေးထိုးစက်ရုံ၏ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲမှုသဘောပေါက်လိုင်း assembing အပြည့်အဝအလိုအလျှောက်အစိတ်အပိုင်းများကိုတည်ဆောက်ခြင်းစသည်တို့ကိုကုမ္ပဏီလည်းနို့သီးဓာတ်ခွဲခန်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေးအပေါ်ကြီးစွာ emphaaia ထားသည် Lab မှ finish ကိုနိုင် စွမ်းဆောင်ရည်ရေစိုခံ, Flame ဟာ Rresistance, High-အနိမ့်ယာယီအလုပ်သမား, .Anti-ချေး, LM များအတွက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအားဖြင့်စစ်ဆေးနေ ......
Qiligang စက်မှုဇုန်, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, တရုတ်
© Copyright - 2010-2019: အားလုံးအခွင့်အရေး။ အသားပေးထုတ်ကုန်များ- မြေပုံအညွှန်း - မိုဘိုင်းဆိုက်ကို
လေကြောင်းလျှပ်စစ် Connectors , လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုး Connector , cable O ring, လျှပ်စစ် Plug Connectors , Terminator လျှပ်စစ် Connectors , cable ကိုလျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးအဘို့အဂလင်း ,